I-Etsy Integration - i-Amazon, i-Ebay, i-Allegro ne-Etsy ene-Propar E-export
Ukuphatha isitolo sakho se- etsy.com kulula nge-Propars!
I-Propars yikho konke okudingayo ukuthengisa imikhiqizo yakho ekhethekile kungxenyekazi enkulu kunazo zonke yomkhiqizo wezandla!
Propars, ngokuhlanganiswa kwayo kwe-Etsy, thengisa imikhiqizo yayo ku-Etsy futhi usakaze imiklamo yakho kuwo wonke amazwekazi!
Ama-oda wakho avela ku-etsy aqoqwa kusikrini esifanayo nayo yonke eminye imiyalo yakho.
Ungathengisa imikhiqizo oyengeza ku-Propars ku-Etsy ngokuchofoza okukodwa.
Ama-oda wakho avela ku-Etsy aqoqwe esikrinini esifanayo nayo yonke eminye imiyalo yakho.